ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အနုပညာလောက ကို စော်ကားလိုက်တဲ့ နတ်ကတော် သားစိုး ~ Myo Chit Myanmar
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အနုပညာလောက ကို စော်ကားလိုက်တဲ့ နတ်ကတော် သားစိုး
2:52 PM 96 comments
ခုတလော ပြောင်းလဲနေတဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဝေဖန်သံ ကဲ့ရဲ့သံ ထောက်ခံသံ ရှုံ့ချသံတွေ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပုံစံများစွာ နဲ့ ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီ လူသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ယုံကြည် ဝေဖန် သုံးသပ် ခံစား ဖွင့်အန် ပိုင်ခွင့်ကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ သဘောတူတူ မတူတူ အတွေးအခေါ်များစွာ ကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဖက်က ကြည့်ရှုခံစားပေးခဲ့ပါတယ် ... ။
ကျွန်တော် ဟာ ၈၈ မျိုးဆက်ပေမယ့် တော်လှန်ရေးသမား လဲ မဟုတ်ပါ ...
ကိုသူရ တို့ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့လို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံရဲတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားလဲ မဟုတ်ပါ ...
ကိုကျော်သူတို့ မရွှေဇီးကွက်တို့လို လူမှုရေးသမားလဲ မဟုတ်ပါ ...
ရုပ်ရှင် ဂီတ စာပေ နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာ မှန်သမျှကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ အနုပညာ သမားတစ်ယောက်ပါ ...
၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အင်တာနက် နဲ့ လူမှုကွန်ယက် ကြောင့် ခေတ်မှီ တိုးတက်လာတဲ့ ဂီတ လောက မှာ HipHop ဟာ လျှင်မြန်စွာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်အများစု ကို အတိုင်းအတာ ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်
ဒီကနေပြီး Hip Hop ဂီတ ပညာရှင် လူငယ်များစွာ လဲ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်
မျိုးကျော့မြိုင် ရဲ့ " Rap သီချင်းဆိုရင် လုံးဝမကြိုက် " ကနေ စလိုက်တဲ့ Hip Hop ရဲ့ သက်တမ်းဟာ Acid, Theory, Sinergy စတဲ့အဖွဲ့တွေ ကနေ ခု ရေပန်းစားနေတဲ့ မြောက်များလှစွာသော မရေတွက်နိုင်တော့တဲ့ လူငယ် တေးသံရှင်သစ်တွေ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ထိပါဘဲ ..
ဒီမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ခံစားမှု တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်
ကျွန်တော် မှားချင်လဲ မှားမယ် မှန်ချင်လဲ မှန်မယ် ပေါ့လေ
ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ Hip Hop ဆိုတာ Computer Program တစ်ခု နဲ့ ပိုတူပါတယ်
အားလုံးက Acid, Pro Tools, Cu-base ဆိုတဲ့ Software တွေ နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Drum Beats တွေ ရဲ့နောက်မှာ Rhymes ဆိုတဲ့ကာရန်တွေ နဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကဗျာ တွေကို Pre-Programmed Music တွေ နဲ့ စည်းချက်ညီအောင် ရွတ်ဆိုခြင်းပါဘဲ
ဒါကလဲ လွယ်ကူသလားဆိုရင်တော့ မခက်ခဲပေမယ့် မလွယ်ကူပါဘူး
Hip Hop သမား သို့မဟုတ် Rapper တစ်ယောက်မှာ တခင်္ဏုပတ္တိ ဥာဏ် ဆိုတဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် အရမ်းထက်မြက်ရပါတယ်
ဒီတော့ Hip Hop ကို ကျွန်တော် ရိုးသားစွာ ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင် သေချာ မနှစ်သက်ပေမယ့်
သင့်တင့်တဲ့ လေးစားမှုတစ်ခု တော့ ပေးနိုင်ပါသေးတယ်
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ဂီတလောက မှာ ကျွန်တော် ဘယ်လို မှ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အကွေ့တစ်ခု ရုပ်တစ်ရက်ရောက်လာပါတယ် ...
အဲ့ဒါကတော့ မြန်မာသံစဉ် သီချင်းတွေကို နတ်ကတော် ဒိုး တွေလို Drum Machine တွေ နဲ့ တီးထားပြီး မြန်မာ သံစဉ်တွေကို Hip Hop ပုံစံဝင်အောင် ဇွတ်ဆွဲယူ ဖန်တီးထားတဲ့ ဘာမှန်းအမည်မတတ်နိုင်တဲ့ မျိုးမစစ်ဂီတ တစ်ခုပါဘဲ ...
အဲ့ဒိဖန်တီး မှု ရဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ..
ကျေးလက်နေ လူတန်းစားတွေ ...
ဂီတ ကို ဖျော်ဖြေရေး အနေ ထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ ...
ထားရကောင်းမှန်းလည်း မသိတဲ့ ...
(မြန်မာသံ Hip Hop) ဆိုတဲ့ အမျိုးမစစ်တဲ့ အပေါစား ရောယှက် ဂီတ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ကိုအမှီပြုပြီး သားစိုး ဆိုတဲ့ (တောကြိုက် Rapper) တစ်ယောက် ထင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်
ဒါ သားစိုး ရဲ့ သမိုင်းပါ ...
သူဟာ ယနေ့စာရေးနေချိန် မတိုင်ခင်အထိ မြန်မာ ဂီတသမား စစ်စစ် များရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဟာသပျက်လုံးတစ်ခု ထက် ပိုပြီး နေရာမယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ယနေ့ ထွက်လာတဲ့ ပေါ်ပြူလာသတင်းဂျာနယ် ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြင့် ....
"ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းပြည် ကောင်းစားဖို့ကိုပဲ စဉ်းစားပြီး လုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲ ထောက်ခံသွားမယ့် သားစိုး"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂီတအနုပညာရှင် တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာ အခုဆိုရင် ၃ကြိမ် တွေ့ဆုံမှုမှာ ၁ကြိမ်ထက် တစ်ကြိမ် ဂီတဘက် က အနုပညာရှင်တွေ စုံသလောက် နီးပါးတွေ့ခဲ့ ရပေမယ့် ဟစ်ဟော့ပ် အဆိုတော် သားစိုးကိုတော့ တွေ့ဆုံမှုတွေ အထဲမှာ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ တွေ့ဆုံကြတဲ့မှာ ဘာကြောင့် မပါဝင်ဖြစ် တာလဲဆိုတဲ့ အမေး ကို တော့ သားစိုးက ”ကျွန်တော်က သာကူး မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက အဘ အဘ နဲ့ အခုမှ အစ်မ အစ်မ ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေထဲမှာလည်း ကျွန်တော်မပါဘူး။ ကျွန်တော် နဂိုကတည်းက BBC, VOA, RFA စသဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း ရှိတဲ့ အချိန်ကတည်းက ကမ္ဘာ့ သတင်းစာတွေ နဲ့ကအစ မြန်မာ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ပွင့်လင်း စွာပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က ဖြစ်သင့်တာ၊ ကောင်းတာကို ပြောတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ အနှောင့် အယှက်မပေးဘူး။ အခုမှ ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ အထဲမှာ အရင်တုန်း ကတော့ အခွင့်အရေး ရတဲ့ဘက်မှာ နေပြီး၊ အခုမှ ပြောင်းလာကြတဲ့ လူတွေလည်းပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာလဲဆိုတာ ပရိသတ် က သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်လိပ်ပြာ ၊ကျွန်တော် လုံတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်သလဲ ဆိုတာ ပရိသတ်က သိပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လည်း ကျွန်တော့် ရဲ့ရပ်တည်ချက် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကော ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေလုပ်ပေးမှာလဲ။ အခုလက်ရှိ အစိုးရ ကကော ဘာတွေ လုပ်ပေးမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်မယ့်သူက ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ပါစေ။ တိုင်းပြည် တိုးတက်အောင်၊ အခြေအနေ တိုးတက်အောင် ဦးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေ ဘက်ကို ကျွန်တော် လိုက်မှာပါပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မရှိပါဘူး။ သာရင် ကူးတတ်ကြတဲ့ လူတွေ အတွက်လည်း ကျွန်တော် သီချင်းစပ်ထားပါတယ်။ သာကူး နဲ့နှာဘူး၊ နှာဘူး နဲ့ဂန်ဒူး၊ ဂန်ဒူးနဲ့ အာလူး ဆိုပြီး စပ်ထားတယ်။ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်” လို့ပြောပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သားစိုးက ဧပြီ ၁ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက် ပွဲမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ”အရင် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာ အဟောင်းတွေကို ယူပြီးတော့ အခု လက်ရှိမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရမယ်။ ကြည့်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့ သူကို ကျွန်တော် တို့က တကယ် ထောက်ခံမှာပါ။ လောလောဆယ် မှာတော့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ ကျွန်တော် မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအစွဲ လည်းမရှိပါဘူး။ တိုင်းပြည် ကောင်းစားဖို့ အတွက် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားဘဲနဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးကိုပဲ စဉ်းစားပြီး လုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၊လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲ ကျွန်တော် ထောက်ခံ သွားမှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့ဘာသာ ဘာပြောပြော ဘယ်လို နေနေ ကျွန်တော် ဘယ်လို မှ အလေးမထားသလို ခံစားနေဖို့တောင် စိတ်ကူးမရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က တို့ထိ လာလို့ ဖတ်လိုက်မိတဲ့ ... သူပြောခဲ့တဲ့ ... စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော့် ရင်ဝ ကို ဆောင့်ကန် ခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ် ..
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကော ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေလုပ်ပေးမှာလဲ ".. တဲ့
အမေစု ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ
ခုထိလဲ အမေစု ဘာတွေ လုပ်ပေးနေသလဲ ဆိုတာ သားစိုး အိမ်ရှေ့ ဆိုက်ကားဂိတ် က ဆိုက်ကားသမားတွေ နဲ့ သူတို့ ထိုင်တဲ့ လဖ္ဘက်ရေဆိုင်က စားပွဲထိုးတွေ ကို မေးရင်တောင် သိနိုင်တဲ့ အဖြေပါ
အမေစု ကိုတောင် ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ရအောင် သူဟာ မြန်မာ့အကျိုးကို ဘယ်တုန်းက ဘယ်လောက် သယ်ပိုးခဲ့ပါသလဲ
မြန်မာတွေ အတွက် သူဘယ်လောက် အနစ်နာခံခဲ့ဖူးပါသလဲ
သားစိုးဆိုတာ မနေ့တနေ့ကမှ နတ်ဆိုင်းသံတွေကို Drum Machine နဲ့တွဲပြီး မြန်မာသံစဉ်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖျက်ဆီး အမြတ်ထုတ် ခဲ့တဲ့ ပေါ်ပင်လိုက် တောကြိုက် အညတြ ကောင်ပါ
ဒီလိုကောင်က ခုမှ နားထင်သွေးရောက်ပြီး အမေစု ကိုရော အမေစု ကို ထာဝရ လေးစား ချစ်ခင်ခဲ့ ပေသော်လည်း ယ္ခင် အစိုးရ ရဲ့ ရန် ကို ကြောက်နေရလို့ မခေါ်ပြောရဲပေမယ့် ကိုသူရ ဦးဆောင်ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ကျိုးစားနေစဖြစ်တဲ့ အနုပညာ သမားတွေ အားလုံးကို ...
" သာရင် ကူးတတ်ကြတဲ့ လူတွေ အတွက်လည်း ကျွန်တော် သီချင်းစပ်ထားပါတယ်။
သာကူး နဲ့ နှာဘူး၊ ၊ နှာဘူး နဲ့ ဂန်ဒူး ၊ ဂန်ဒူး နဲ့ အာလူး ဆိုပြီး စပ်ထားတယ်။ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ” လို့ တိုက်ရိုက်စော်ကားလိုက်ပါတယ် ၊
ဒီတော့ ကျွန်တော့်မှာလဲ ကျွန်တော့် အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ မသန့်တဲ့သွေးကိုဖေါက်ထုတ်ဖို့ တာဝန်တစ်ခုရှိလာပါတယ်
တစ်ကယ်တန်း သားစိုး ဆိုတဲ့ ချာတိတ် ပြောတဲ့ စကားကမှ သူကတော့ တကယ် မသေချာမခြင်း ဘယ်သူနဲ့မှ မပေါင်းစည်းဘူး ဆိုတဲ့ သာကူးအစစ်ရဲ့ အတ္တကို ကွတ်တိထင်ဟပ်နေတာ လုံးဝ သိသာထင်ရှားပါတယ် ..
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ ပရိသတ်ကြီးကို ကနေ့ကစပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ ပါမွှား နတ်ကတော် သားစိုး ရဲ့ နတ်ဆိုင်းသီချင်းတွေ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုသူရ ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုကိုကြီး ကိုဌေးကြွယ် အစရှိတဲ့ သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားခြင်းအားဖြင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင် ဖို့ အားမပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ...
သားစိုး ဒီစာကိုဖတ်မိမယ်လို့ မျှော်လင့်သလို ဖတ်မိတဲ့အခါမှာ အရာအားလုံးက နောက်ကျသွားလေပြီဆိုတာ သူသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..
ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ သည်းမခံမယ့် အထိခိုက် အပုတ်ခတ် မခံမယ့် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေ စာရင်းမှာ ထာဝရ ထိပ်ဆုံးမှာ ပါတဲ့ အမေစု ကိုစော်ကားလာရင် ကျွှန်တော် ဘယ်တော့မှ ဘာအကြောင်းပြချက် နဲ့ မှ သည်းခံ နားလည် ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်ပါတယ် ...
Posted in: Article,Literature,Myanmar News,Myanmar Political News,News,Political Article,Political Interview
ကိုမျိုးချစ်ကိုထောက်ခံပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ ဘ၀ ကို ဒီတိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက် အနစ်နာခံခဲ့သလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိသိကြီးနဲ့ ဒီ နတ်ကတော် သားစိုးက ပြောတာ
Thu pyaw tar hote lal hote par tal.ma hote lal ma hote par buu.hote tar ka lu myoe swae ma htar bu so tar pr.Daw Su ma ma hote par bu...lan bay ka site kar tha mar ka tai pyay toe tat ag Daw Su htet po loat ng khae mae so yin site kar tha mar ka po kg hmar par.dr ko lat khan ng ya par mae.Daw Su ma kaung bu ma hote par buu.kaung par tal.ta gal loz thu htet kaung tae lu paw khae yin......moe ma pyo pyo khae thaw pop byar...dar ko lat khan ng ya mae lay...dar so naing gan 1 khu hmar tha ma da 1 yot ka bar lozamyae tan tha ma da ma phit tar lal? Thu htet kaung dae lu paw lar loz pae pop.ma hote bu lar.nout sone ka tot Daw Su ma ma hote bu..tai pye toe tat aung loat mae so site kar tha mar lal tha ma da phit ng par kyoung tin pya chin par tal......
Kyaw Zin Latt said...
ငါ့သားရဲ့ သား ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ မွေးရကြိုးမနတ်လိုက်တာ
ဒီမိုကရေစီ နိင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို လွတ်လပ်စွာတွေးခွင့် ယူဆခွင့် ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်
သူလုပ်တာ မှားချင်လဲ မှားနိင်တယ်
မှန်ချင်လဲ မှန်န်ိင်တယ် ဘာလို့ လဲ လမ်းမဆုံးသေးဘူး
အဲတော့ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲ ခွင့်ရှိတယ် ထင်တယ်
တစ်ဦးတစ်ယောက် ကပဲမှန်တယ် ကျန်တဲ့ သူတွေကမှားတယ် အဲဒါက ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်
ကိုယ်ဖာသာရွေးချယ်မူ ကကိုယ်အပေါ်မှာပဲ သက်ရောက်မူရှိမှာပါ
WHAT DO YOU KNOW TARR SOE..FUCKING GUY!!!!
Admin Group said...
ပြောပြပါဦး. ကျွန်တော့်ကိုမေးတဲ့သူက ဖြစ်ဖြစ်
မြောက်မြောက် ဘာမှ ပြနိုင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆို
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကော ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေလုပ်ပေးမှာမို့လို့လဲ".. လို့ပြောလိုက်တော့ "သားစိုး" မှာ စောက်သုံးမကျတဲ့ ဦးနှောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ မေးစရာမလိုအောင်ပါပဲ။ ဒေါ်စု ဘာလဲ? ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ? ဘာတွေလုပ်နေလဲ? .. ဆိုတာ ခွေးကလွဲရင် လူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လဲ .. အိုဘားမားတို့နဲ့ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကပဲ ရူးနေခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါ။) ဒါကို သူ့ဦးနှောက်လေးနဲ့ပြန်ပြီး Judgement လုပ်နေရအောင် "သားစိုး" ဆိုတာ ခွေးထက်မိုက်လို့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီစကားတွေပြောတာ သူကိုယ်စားပြုနေတဲ့ Hiphop လောကအပါအဝင်၊ အနုပညာလောကကိုလဲ အရှက်ရစေပါတယ်၊ မြန်မာပြည်သားတွေကိုလဲ အရှက်ရစေပါတယ်။ မွေးကတည်းက သူဒီလိုဦးနှောက်နဲ့မွေးမိတဲ့ သူ့မိဘတွေကိုလဲ အရှက်ရစေမှာပါ။
Your father is here,call me pa pa said...
လောကမှာ စကားဆိုတာ ကိုယ်ယုံကြည်တိုင်း မှန်တယ်ထင်တိုင်း
လျှောက်ပြောရမယ့် ကိစ္စမပာုတ်ဘူး...။တစ်ခါတစ်လေ ရင်ထဲမှာ မျိုသိပ်ထားသင့်ရင် ထားရမယ်..။
အခုသူက အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ ဒေါ်စုကို စော်ကားတဲ့ 
အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့.. နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရရင် ခင်ဗျား ဒေါ်စုကိုမလေးစားဘူး ၊ အထင်မကြီးဆိုရင်တောင် လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မျက်နှာကိုထောက်ပြီး
စကားကို အခုလို ပောာ့ပောာ့ရမ်းရမ်းပြောပိုင်ခွင့် လုံးဝမရှိဘူး..။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးကိုစော်ကားပြောဆိုတာကို ဗိုလ်ချုပ်ကိုပါစော်ကားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် နဲ့ တူတူပဲ... ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကော ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေလုပ်ပေးမှာလဲ။ အခုလက်ရှိ အစိုးရ ကကော ဘာတွေ လုပ်ပေးမှာလဲ။
အခု သမ္မတသိန်းစိန်ကောင်းပြနေတာပာာ ဒေါ်စုနဲ့ဒေါ်စုကို အထင်ကြီးလေးစားကြတဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုကသာ အဓိကအကြောင်းအရင်းပဲ..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်စုသာမရှိခဲ့ ဘူးဆိုရင်
အခုအချိန်မှာ ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်သလဲ ?? ထွီး.. မတွေးရဲစရာပဲ..။
ဒေါ်စုပာာ မြန်မာနိုင်ံငံအတွက် ဘာလုပ်ပေးခဲ့ သလဲပာုတ်လား ??
စဉ်းစားကြည့် စမ်းပါ..၊ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရဖို့ အတွက်
ကိုယ်ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းနဲ့ သားတွေကို စွန့် လွှတ်ပြီး
မျက်နှာမြင်လေးတောင် မြင်ခွင့်လေးတောင် မရခဲ့ ရရှာဘူး.။
စာနာကြည့် စမ်းပါ.. သင်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဲဒီလို မျိုး
အနစ်နာခံ စွန့် လွှတ်ခံနိုင်မယ်များထင်နေလား ?? ဝေးသေး
ပြီးတော့ သားစိုး... သူကဘာကောင်လဲ ?? အောင်မြင်ဖို့ အတွက်
နတ်သီချင်းတွေလုပ်ဆို... ၊ကိုကြီးကျော်.. မနှဲလေးလုပ်လိုက်
နတ်ကတော်လို ၀တ်လိုက်စားလိုက် ကလိုက်နဲ့လွဲမှားတဲ့ နတ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို မြန်မာပြည်မှာပြန့် ပွားအောင်လုပ်တဲ့ သူ၊
ပြောရရင် ဗုဒ္ဓသာသာ သနာဖျက်သူအဖြစ်
ပါနာမည်တပ်လို့ ရတယ်.... ။
THARR SOO,the boy who he was born by rich parents.Therefore he was lucky and he can do as he like (likeamad).What will be he if his parents was poor.Finally I guess that THARR SOO who stupid and think highly of himself has no brain in his head.
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ လူမျိုးစုတစ်ခုမှာ တစ်ခုတည်းကို ပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲလက်ကိုင်ထားတတ်ရင်ပျက်စီးခြင်း လမ်းစဆိုတာတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်ရောက်လာကြမှာပဲလေ...
ဒီလိုမျိုး အများနဲ့မတူတဲ့လူတန်းစားတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာမှသာ..အတိုက်အခံဆိုတာရှိလာပြီး အမြဲတမ်းတိုးတက်လာမှာပေါ့...အတိုက်အခံ မရှိပဲဆက်လုပ်သွားတဲ့နေရာတိုင်း နိုင်ငံတိုင်း ကိုကြည့်လိုက်ရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာပျက်စီးနေကြ တာကိုတွေ့ရမယ်....ဒါတွေကိုလည်း သည်နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ခဲ့ကြတာပဲ...
ကောင်းပါတယ် ဆက်ပြီးဝေဖန်ကြပါ.... ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ သားဆိုး ဆိုတဲ့ ချာတိတ်ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အချစ်တော် ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုလက်လွှတ် ရမလား တော့မသိဘူး....ဒါကလည်း ပြဇာတ် အပေါ်မှာမူတည်မှာပဲ.....
အန်တီဆုကကောဘာလုပ်ပေးမှာလည်း????ဟုတ်လား အဲ့ဒီကောင်သားဆိုးဆိုတဲ့နတ်ကတော်ကိုယ်မေကိုယ်....ကကောတိုင်းပြည်အတွက်ဘာလုပ်ပေးလို.လည်းမနေ.တစ်နေ.ကမှလူဖြစ်လာပြီး ဟိုမေးဒီမေးလာလုပ်နေသေးတယ်..ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုကိုယ်နားလည်ပြီးရှက်တတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို.တောင်ကောင်းတယ် ..မျိုးမစစ်ကောင်
awwww...သားစိုး. သာကူးတော့မဟုတ်ဘူး နင်က..သာနိုက်.. American citizen မိန်းမကို citizen ရဖို့အတွက်ယူလိုက်တာ. သာနိုက်.. US Food stamp နဲ့ အသက်ရှင် နေတဲ့ကောင်.
As he said he doesn't like "thar ku", he just waiting for the chance and missed out to get possitive minded. When the time comes he will be "thar ku" itself. whtadifference....
I dont think you really need to comment that deep on one eye's view.Let him deserve what he said.. He might not have been "a mean" on this status.C'mon.. all the people of this generation has "NO CLUE" on the political and "NO CLUE" on the economical's point of view.Why dont we just keep it as one's point of view.I'm not going for any one's side but yet it would beadisgrace to look down on each others at this point where everyone is participating for the goods of what they are all doing,from every corner of aspects.
Why dont we have "the positive attitudes" towards people and comment on their status but not on the person.We can all help them correct to walk the RIGHT path,instead of BLAMING. I dont listen to any "HIP HOP songs or i'm notaR&B fan.But just being "BURMESE" i want to suggest we all "THINK POSITIVE" and help people choose the "RIGHT" ,and it would help your blog go alot better in POSITIVE POINT OF VIEW instead of blaming on eachothers.
သားစိုးရေမင်းမှန်တယ်ဟေ့.....ဆက်လုပ်....အသစ်ထွင်တာကို ဖျက်ဆီးတယ်လာပြောနေတယ်...အဲ့လိုဆို ..Rapper တွေ ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်ဝတ်လာတာကရော.....copy လို့ copy မှန်းမသိ...အသစ်ထွင်တော့ပြောချင်ကြတယ်...ယိုးဒယားမှာ Funky (150bpm)..INdo မှာ AsiaFunk(170 bpm)..ဗီယက်နမ်မှာ Drum N Bass (136bpm)...မြန်မာမှာဘာရှိလဲ...ခုမှထွင်တာအားမပေးရင်နေမဝေဖန်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မသိပဲ...သားစိုးမင်းအစားတင်းတယ်....
Prince Casper said...
Well, not gonna say if he's right or if he's wrong. Many people through out the world knows what Aunty Su has done for this country. But now I speak to Myo Chit Myanmar who wrote this down. Did u even read your article before u posted it. If Aunty Su had read this I don't think she would have been angry at all. I'm notafan of Thar Soe but what we said wasn't exactly an offense. He just used sentences asafigure of speech. Everybody and I mean everybody has the right to follow their own thoughts and beliefs. And as for Hip Hop, maybe u understandasmall percentage of it but u're just getting angry and insulting his music. Hip Hop is notacomputer based thing. It comes from the heart, the soul and the life of the artist. There is no such thing as Hard or Easy to create in Music. It's justaway of expressing everything. Don't get angry and take it out likeakid. Beagrown up and think of the things that u do. I sure hope u post this. If u denied it, it would just show me the kind of person u r. Democracy is fair. R u???
သားစိုးရေ...မင်းအစားရင်နာတယ်...ရည်ရွယ်ချက်မသိပဲဝေဖန်နေကြတယ်...နိုင်ငံရေးတော့မပြောတော့ဘူး ဂီတအကြောင်းပဲပြောလိုက်ဦးမယ်...ယိုးဒယားမှာ Funk(150bpm), INdo မှာ AsiaFunk(170bpm), ဗီယက်နမ်မှာ Drum&Bass(139bpm), England မှာ HardCore(145bpm),မြန်မာမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှိတာ ကလို့ရတာ နတ်ဒိုးနဲ့ဒိုးပတ်ပဲရှိတယ်..ဒါကိုပြုပြင်ပြီး နိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ဖို့ဘယ်သူစဥိးစားမိသလဲ.....club တွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားကသီချင်းတွေပဲကြားနေရတာ ကြာတော့ ရှက်လာပြီ.........
အမလေး ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေရယ် နည်းနည်းမှ အထိမခံပါလား။နောက်ကျရင်မြင်ယောင်သေးတယ် အမေစု မကောင်းကြောင်းရေးရင် ဖမ်းမယ်၊ထောင်ချမယ် စာပေစိစစ်ရေးလိုမျိုးပေါ်လာအုံးမှာ။ဘယ်လိုဒီမိုကရေစီသွားမလဲတော့ မသိဘူး။ admin group မေးသလိုပဲမေးချင်ပါတယ်။လက်စလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာတော့တကယ်
လဲသေးပါဘူး။သားစိုးက သာကူးတွေထက်တော့သာပါသေးတယ်။ဒီပိုစ့်ရေးတဲ့သူက ပုဂ္ဂလ ကိုမကြိုက်တာနဲ့ အနုပညာကိုပါစော်ကားထားသလိုပဲ
ko gyi Myo said...
မင်းကဘာသိလို့လဲ၊ တို့ပြည်သူတွေလူ့အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အ၀ရအောင် လုပ်ပေးနေတာတွေ၊ ဒါတွေပြောလည်းမင်းတို့လိုကောင် တွေကနားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းတို့ကော တိုင်းပြည်အတွက် မပြောပါ နဲ့ဦး၊ မင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေ ကောင်းစားရေး အတွက် ဘာတွေလုပ်ဖူးပြီးပြီလဲ။
သာစိုး မင်းဟာ ဂေါက်ကြီးပဲ စောက်ပေါ အရူး
အရင်ကတည်းက မင်းသီချင်းတွေကို နားမထောင်တာ ပေါကြောင်၂ နဲ့ 
လူတိုင်းတခါတလေဒါမျိုးဖြစ်တက်တာဘဲ တယောက်နဲ့တယောက်အတွေးအခေါ်ချင်းတူကြတာမှမဟုတ်တာ သူများကိုထိခိုက်ပြီးပြောတာမကောင်းပေမယ့် သူတွေးနှိုင်သလောက်ကိုတော့ သူပြောခွင့်သူ့မှာရှိတာဘဲလေ
လူ ဆို တာ အ တ္တ နဲ့ မ ကင်း ကြ ပါ ဘူး
ဒီ မို က ရေ စီ စ နစ် နဲ့ သွား ကြ တဲ့ အ ခါ လွတ် လပ် စွာ ကွဲ လွဲ ခွင့် ရှိ ပေ မဲ့ ကိုက် တိုင် က ဘား မှ မ လုပ် ဘဲ နဲ့ သူ များ ကို ဝေ ဖန် တာ တော့ မ ကောင်း ပါ ဘူး အူ ကြောင် ကြောင် သီ ချင်း လေး နဲ့ ပေါက် လာ ပြီး အူ ကြောင် ကြောင် စ ကား ပြော တာ မ ဆန်း ပါ ဘူး ဗျာ ဒါ ပေ မဲ့ သူ ဘာ သာ လွှင့်သွား မှာ ပါ
မ စိုး ရိမ်း ကြ ပါ နဲံ ဗျာ
Aung Thiha Aung said...
amaze n amuse. juz three latter word, W.T.F!!!
shameless to sign craps..
n now shameless again to comment to who-the-whole-world-know..
again. W.T.F!!! lol
THARR SOO SO TAE KG KA THAN SHWE A MYO LAR KWA..NGA LOO MA TARR..TAY NAR KG
ခွေမသားအရင်ကတည်းက အဲဒီကောင်လေးကြည့်မရတာ အခုတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့.မအေလိုးလေးတွေကြတာပေါ့ကွာ..
ဘာမှ မသိတဲ့သူက ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာ မသိလို့ ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် သူ့ စကား ကို အကောင်းမြင်ပေးလိုက်ရင် ဒီထက်ပိုလုပ်ပြဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ပိုသိသာပါတယ် အဆိုးမြင်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါ ထဲ့ပြောကြရင် နောက်ဆုံးတော့ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာမှာစိုးရပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ကို အပြည့်အဝ နားမလည်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင် ဒီမိုကရေစီ ကို မြတ်နိုးတယ်ဆို တစ်ခြားလူတွေကိုပါ နားလည်လာအောင် ရှင်းပြပေးသင့်ပါတယ်။ ယုံကြည်တယ်ဆို အတိုက်အခံမလုပ်ဘဲ မသိသေးတဲ့သူတွေပါ လက်ခံနိုင်လာအောင် ဝိုင်းပြီးကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
ကျနောတိုမှလွတ်လပ်စွာသဘောကွဲလွဲခွင၇ှိပါတယ်ဗျာ ဒါပေမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျနောကိုဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတာကတောဗျာ ဒီကောင်ဂေါက်များနေသလားပဲ ကလေးကလား တောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ မစင်းစားတတ်တာလား ဦးနောက်မ၇ှီတာလားသိဝူးနော်
Lynn Zat said...
အဲလောက်လဲ ဒေါသတွေထွက် မနေကြပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့အားကိုးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အားကိုးလောက်တယ်ဆိုတာ အခုအချိန်မှာမှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ မှာ ငါတို့ နွံနစ်ခဲ့တာ .crony တွေထွန်းကားခဲ့တာတွေ။ သူသာ တကယ်တော်ခဲ့မယ်ဆို ငါတို့နိုင်ငံ က ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်ကတည်းက ပြောင်းလဲခဲ့ရမှာ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကနိုင်ငံရေး သမားပါ။ပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကသာ celebrity တွေနဲ့ တရုံးရုံး နဲ့။ခုချိန်မှာသူတကယ်လုပ်ရမှာက အဲဒါမဟုတ်ဘူး။
လူထုဟောပြော ပွဲတွေ / ပါတီ စည်းရုံးရေးတွေလုပ်ရ မှာ။ ခုတော့ သူပဲ သီချင်းဆိုတော့မလို/မင်းသမီး ပဲလုပ်တော့မလို ။
ထားလိုက်ပါကွာ သားစိုးကို။သူကအနုပညာသမားပါ။မင်းတို့ပြောတဲ့ Democracy ဆိုတာလွတ်လပ်စွာကွဲပြားခွင့်ဆို။ သူယုံချင်တာ ယုံခွင့်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ သူလည်းနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါ။
I'd like to say Don't take it personally!!
Your criticism is welcome.
ဒီ post တခုနဲ့ တင် မျိုးချစ် မြန်မာကို တမျိုးမြင်သွားပါတယ်...။ ဒါကြီးက တော့ သက်သက်မဲ့ သားစိုး နဲ့ ရန်တိုက်ပေးသလို လုပ်ပြီး သတင်းမဟုတ်တဲ့ ဟာကို သတင်းလိုတင်ပြီး နာမည် ရအောင် လုပ်ယူထားတယ်လို့ လွတ်လပ်စွာတွေးတော ပြော ဆိုခွင့်ရှိစွာ ၀င်ရေးသားသွားပါတယ်..။ မှန်တာလုပ်တဲ့ သူဟာ ဘယ်တော့ မှ နာမည်ကျသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ အဲ့ဒီအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကောင်း မကောင်း၊ တော် မတော်ကိုလဲ မဲ ခွဲ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိတယ်..။ ကျွန်တော်လဲ အမေစု ကို ထောက်ခံပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် သားစိုးလိုလဲ ပြောခွင့် ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာလှည့် ကွက်တွေ အများကြီးပါ..။ အတွေးအခေါ်တွေ များများ ရမှ ပဲ တကယ် မှန်တာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ..။
ပေါ်ပြူလာနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သားစိုးပြောတာ ဖတ်ပြီး ခံစားမိတာကတော့ သူပြောတာ တခုမကျန်မှားနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အမေစု ကို ပြောတဲ့တချက်က အများလက်သင့်မခံနိုင်သလိုမျိုးဖြစ်ပေမယ့် တခြား သူထောက်ပြသွားတဲ့ထဲမှာ လဲ အမှန်တွေပါတာပဲ။
အပြောမတတ်လို့ ဆဲသလိုဖြစ်သွားတာတခုပဲရှိတယ်။ ကျွန်နော်တို့နိုင်ငံကြီး ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ အဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီလို့ ကြွေးကြော်ထားပင်ငြား လဲ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မပြောင်းနိုင်သေးသရွေ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်အုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ သူမှာ လဲ သူ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကို နိုင်ငံသား တယောက်အနေနဲ့ ဒီမို ကရေစီနည်းလမ်း ကျကျဝေဖန် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ ။ သူပြောတဲ့သာကူးတွေ ဆိုတာလဲ ပြင်ပလက်တွေ့ မှာ မျက်ရှိရှေ့တင် တကယ်ရှိနေတာပဲ။ အမေစုကို ဝေဖန်လိုက်လို့ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ က မရင့်ကျက်သေးဘူး လို့ယူဆလို့ရတယ်ဗျ။ အမှန်က နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိရမှာ။ ဒါဟာ ပြည်သူတယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲလေဗျာ။ အဝေဖန်မခံနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ပြည်သူတင်မြှောက် ထားတာမဟုတ်ပဲ မတရားအာဏာလုယူထားတဲ့ အာဏာရှင်တွေ ပဲဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ အမေစုက ပြည်သူချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာ ဗိုလ်ချုပ်သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပြည်သူအသံကို နားထောင်လို့ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားထဲကျအောင်နေနိုင်လို့ဗျ။
ကျွန်နော်သားစိုးနဲ့ လုံးဝမသိပါဘူး။သူ့သီချင်းလဲ နားမထောင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကို သတိထားမိတာ နယူးယောက်တိုင်းမှာ သူ့ပုံနဲ့ အင်တာဗျူး တာက စတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာထဲမှာ သားစိုးနဲ့ အင်တာဗျူး ထားတာ ပါလာဖူးပါတယ်။ အဲ့ အကြောင်းကို အလုပ်က မိတ်ဆွေတယောက် က မင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူအကြောင်းပါတယ်ဆိုပြီး လာပြလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ နယူးယောက်တိုင်း လို သတင်းစာထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဆိုကထဲက သေးသေးမွှားမွှား မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်က စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ဘယ်သူမှအသံမထွက်ရဲပဲ နင်းသမျှပြားနေရတဲ့ နင်းပြားဖြစ်နေချိန် မှာ မြန်မာပြည်ထဲက အကြောင်းကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောနေလို့ သူ ပြန်ရင်တော့ အင်းစိန်တောရ ရောက်တော့မှာပဲလို့ ထိထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နယူးယောက်တိုင်းက အင်တာဗျူးတဲ့ထဲမှာ ဒီရောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာအရေးကို ရှေ့က နေလုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့ မိုးသီးဇွန်တို့ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ မဟုတ်ပဲ ဘာလို့ ငချွတ်လေး လို့ လူတွေ ထင်ကြတဲ့ သားစိုးဖြစ်နေရတာလဲ။စဉ်းစားကြည့်ရင်သိမှာပါ။
သူ့ဦးလေးအရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်ကြောင့် မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
ကျွန်နော် အမြင်က သူ့ဖက်ကလို့ထင်လို့ ကျွန်နော့် ကို ၀ိုင်းဖဲ့ကြမယ်ဆိုလဲ ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှု့ နဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြလို့ရတယ်လို့ ခံယူလို့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်မြင်တာကို ပြောပြတာပါ။
သားစိုးမအေလိုးးးငါလိုးမသားမျိုးး ရို့ ရို့ ဟေကောင်သားစိုးကိုမေကိုလိုးး မင်းနှမငါတက်လိုးးး ရက်ခ်ပါ လားးငါလိုးမသားး အူကြောင်ကြောင်တောကြိုက်သီချင်းနဲ့ အောင် မြင်တော့ စောက်သံကထွက်လာတယ် ငါလိုးမသားး မအေလိုးတောအဆိုတော် ခွေးသား
I scream in silence said...
သားစိုးရဲ့ music အပေါ်ထားတဲ့ attitude နဲ့ သူ့ကိုအားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ချို့ကို အစကတည်းက နားမလည်နိုင်တာ.... အခုတော့ သားစိုးရဲ့ overconfident ကြောင့် တော်တော့်ကို စိတ်ပျက်မိတယ်.... သီချင်းစာသားတွေကလည်း တန်းမ၀င်တဲ့ဥစ္စာ... အခုတော့ personality ကပါ တော်တော့်ကို မှားယွင်းနေတာပဲ...
သားစိုးပြောတာ တစ်ခုမှမလွန်ပါ၊ သားစိုးကို နဂိုက အငြိုးရှိတဲ့တစ်ယောက်က သားစိုးစကားကို ပုံကြီးချဲ့မီးမောင်းထိုးပြီး အဆိုးဖက်က ရေးသားလိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ သားစိုးပြောတာ ဒေါ်စုရော ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ..ဘယ်သူကရော ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ.ဆိုတဲ့ မသိလို့မေးတဲ့မေးခွန်းရိုးရိုးလေးပါ..သိသိနဲ့..ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ လို့ ချော်တောငေါ့တဲ့ မေးခွန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သားစိုးရဲ့ နတ်ဒိုးက ဘယ်လိုပဲ မကြိုက်သူတွေရှိရှိ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်ဆဲရေးလုပ်လုပ် သားစိုး ဂီတနဲ့ ပျော်နေတဲ့မြန်မာတွေကို သတင်းကျွတ်တို့ သင်္ကြန်တို့ တခြားပွဲတော်တို့မှာ သန်းနဲ့ချီပြီး တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါကို ဖင်ပိတ်ငြင်းချင်လည်းငြင်းကြပေါ့။ နောက်တစ်ခုက အမေစု ထိ ဓါးကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ အုပ်စုတောင့်တိုင်း မျက်နှာလိုမျက်နှာရ ၀ိုင်းဆဲကြမယ့် စိတ်ဓါတ်မျိုးဟာလည်း ဒီမိုကရေစီနဲ့အဝေးကြီးပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးကို ခင်ဗျားတို့လေးစားတဲ့ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က သဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကဲ..သားစိုးက ဘာလုပ်ပေးဖူးလို့ ဒေါ်စုကို ဒီလိုမေးရသလဲ ခင်ဗျားတို့က မေးရင် ခင်ဗျားတို့ရော ဘာလုပ်ပေးဖူးလို့ သားစိုးကို ဒီလိုမေးတာအပြင် ဆဲရေးတိုင်းထွာလုပ်ကြရသလဲ ပြန်မေးစရာရှိတယ်။ လူရယ် မူရယ် အနုပညာရယ် အကန့်ခြားပြီး နားလည်ဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်မှုကသာလျင် ဒီမိုကရေစီပိုဆန်မယ်ထင်ပါတယ်။
ချာတိတ် ကို့ဘာသာကို ပေါက်ကရသီချင်းတွေဆိုပီး ၊ မင်း စိးပွားရေး မင်းလုပ်..... လူကြီးတွေကို မထိခိုက်နဲ့ ဘာမှလဲ နားမလည်တဲ့ နားကန်းကောင်ကများ...............ဘောပဲ နတ်ကတော် သားစိုးကောင်.........
အဟက်.. ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ မေးတာကို စော်ကားတယ်လို့ ထင်သတဲ့လား.. ဒါပေမဲ့ ချေပချက်တွေကတော့ အနစ်နာခံခဲ့တာကိုပဲ ပြောနေတာပါပဲ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာလုပ်ခဲ့ပါတယ်လဲ ပြစရာမရှိ.. ဘာလုပ်ပေးမှာလဲလဲ မပြောနိုင် ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်ဘူးလားဗျာ.. ဒါဟာ ဒေါ်စုကို မျက်စိမှိတ်ယုံတဲ့ ပု၈္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်သူအာဏာရှင်တွေ အမြဲကြုံရတဲ့ အခက်အခဲပါပဲ..
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ဆယ့်ငါးနှစ်အကျယ်ချုပ်နေခဲ့ရသူဟာ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး.. ဒီတော့ ဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့တာလဲ အပြစ်တင်စရာမလိုသလို အနစ်နာခံကြိုးပမ်းမှုအတွက် ချီးကြူးစရာပါ.. လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်မှာလဲ ဘာမှ ပြစရာ လောက်လောက်လားလား လုပ်ပေးမှု မရှိပါဘူး.. ဒီတော့ ငြင်းလို့မရတာက အနစ်နာ အပြည့်ခံခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး.. ဒီတော့ အနာဂါတ်မှာ ဘာလုပ်ပေးမလဲ.. မေးသင့်တယ်.. မမေးပဲ ဘာလုပ်လုပ်အိုကေဆိုတဲ့ အနေအထားထက်စာရင် စောင့်ကြည့်မယ် ဘယ်သူဘာလုပ်ပေးမလဲ (ခုဦးသိန်းစိန်အစိုးရကော ဒေါ်စုကော ဘယ်သူ့မှ ခြွင်းချက်မထားဘူး) ပြီးရင် နောက်တစ်ချိန်မဲပေးရမဲ့ အချိန်မှာ ဒါကိုမူတည်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ချမယ်.. တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. နှစ်ယောက်လုံးကိုလဲ မကြိုက်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမယ်.. ဒီလိုအနေအထားဟာ ပိုသင့်တော်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတစ်ယောက်က နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ကို ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ မေးတာဟာ စော်ကားတာပါဆိုရင်တော့ အဟက်.. ရှယ်အယူအဆပါပဲ.. တကယ်ပြည်သူ့အတွက် လုပ်ပေးမဲ့အယူအဆတွေ.. အစီအမံတွေရှိရင် ဒီမေးခွန်းဟာ အဲဒါတွေချပြဖို့ အခွင့်အရေးပါပဲ.. ဒီတော့ ကိုယ်အားပေးသူဟာ အဲဒါမရှိလို့ ထင်လို့များ အတင်းကြောက်ကန်ကန် တုန့်ပြန်နေကြတာများလားဗျာ..
ဒီမိုကရေစီမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတာဟုတ်ပါတယ်၊ အဲ့.....သက်သက်စော်ကားတဲ့စကားကိုတော့ပြောဆိုလို့မရပါဘူး ၊ အမေရိကန်မှာတောင်ပြောလိုမရပါဘူး ၊သားစိုးကပေါက်ကရမိုက်ရိုင်းတဲ့စကားကိုပြောတာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်အရသာမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒါလူမှု့ရေးရိုင်းပျတာသက်သက်ပါပဲ၊ ဒေါ်စုဘက်ကနာကြတယ်လို့မပြောသင့်ပါဘူး၊ ဒေါ်စုရဲ့လူတွေက ဘ၀တွေ၊သွေးတွေ၊အသက်တွေ၊မျက်ရည်တွေ စတေးခဲ့ကြရတာ ဒါကြောင့်ဒီလိူလူတွေကိုမစော်ကားသင့်ဘူး၊စော်ကားတာကိုလည်ခွင့်မပြု့သင့်ဘူး ၊ ဒေါ်စုကလက်ရှိဘာမှလုပ်မပေးနိုင်သေးဘူးထားလိုက်ပါတော့ ၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေကိုလုံခြံစေခဲ့တယ် ၊ စစ်ဘီလူးတွေ ရက်စက်ချင်တိုင်းမရက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ် ၊ ဒါကြောင့် သားစိုး သောက်ပေါ ပြောတဲ့စကားတွေကို မဆီမဆိုင် ဒီမိုကရေစီ ကြောင့်ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့် သေသွားတဲ့မျိုးချစ်တွေရဲ့ မျက်နှာတွေ ၊ ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပါပဲ ၊၊
တိုင်းပြည် တိုးတက်အောင်၊ အခြေအနေ တိုးတက်အောင် ဦးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေ ဘက်ကို ကျွန်တော် လိုက်မှာပါပဲ။ တဲ့ ၊ ဒါဆို မင်းလည်းသာကူးပါပဲ။သားစိုး။ လူဆိုတာက ကောင်းတာ လုပ်ပေးနိုင်မယ့် သူကို ထောက်ခံကြတာ သဘာဝပါ။ သားစိုး မင်းလည်း ဒီအယူအဆ ရှိတာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အခု အမေစု ဘေးမှာ ၀န်းရံ လာကြသူတွေ ကိုဘာဖြစ်လို့ အကောင်းမမြင်ပြောရတာလဲ။ မင်းက သက်သက်မဲ့ အမေစုကိုတိုက်ခိုက်ချင်လို့ ပြောနေတာလား။ အမေစုကိုတိုက်ခိုက်ရင် နာမည်ကြီးမယ် ထင်နေတာလား။ အခု မင်းနာမည်ကြီး နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်ဆိုပြိး နမည်ကြီးနေပြီ။
thi han soe said...
Yeah! He is just talking with below standard and knowledge...very greatful of Aung San Su Kyi and Her ability better than anyone else in Myanmar.
thu ra lin said...
အလကားပကွာ. နက်ကတော်လိုလို အဆိုတော်လိုလို.နဲ့တကယ်တော့.ကလေးကအစသိတယ်..အူကြောင်ကြောင်နဲ့ဆိုတာ..
ဘာတွေလဲဟ။ ပြောတော့ ဒီမို ဒီမို သူတို့ အကြိုက် လိုက်ပြောပေး၇မလိုဘဲ။သူတို့တွေ သူများကို နင်ဘဲ ငစ၊အယူတ်တမာ ပြောတာတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ကိုး။ အရုးတွေ။ ဘာ..ဒေါ်စုကို စော်ကားရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို စော်ကားတယ်တဲ့လား။ ဒါဆို မိုက်ကယ်အဲရစ်ကြီးကို ဘယ်လိုပြောမလဲဟင်။
Tayza T said...
ဒီမိုကရေစီ ရအောင်လုပ်မယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်...
ပြီးတော့ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခြင်းများကိုလည်း မလိုချင်ကြဘူး...ဘယ်မှာလဲ ဒီမိုကရေစီ...မြန်မာ နိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် လူပ်ရှားခဲ့တာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်...ထားပါတော့ လက်ညိုးမကောင်း လက်ညိုးဖြတ်ပါ လက်မ မပါစေနဲ့...ငါးကလေး တစ်ကောင်အတွက်နဲ့ တစ်လှေလုံး မပုပ်စေနဲ့....
Lynn Zat - မင်းလိုလူတွေငါတို့တိုင်းပြည်မှာအများကြီးလိုတယ်ကွာ။
ဒေါ်စုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အဖြေကို အခု Comment ပေးသူတွေဘယ်သူဖြေမှာလဲ။ ဘယ်သူမှမဖြေရင် Admin ကဖြေကွာ။ Personnal တွေမပြောကြေး။ တိုင်းပြည်အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာပဲပြော။
ဥပမာပြောရင်- ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ညီမလေးအတွက်ကျောင်းဆက်မတက် ပဲအလုပ်ဝင်လုပ်ရတယ် လို့မပြောနဲ့။ ကျွန်တော်ဟာရပ်ကွက်ထဲက တံတား ကျိုးသွားလို့ကျောင်းမသွားပဲပြင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စကားပဲပြန်ဖြေ။
မင်းတို့တွေက လူကိုကိုးကွယ်မှာလား? ဒီမိုကရေစီကို ချစ်တာလား? ဆောက်တလွဲ တွေ
ပြောနေကျတယ်။ ဘာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့ အားနာသင့်တယ်ဆိုတာကပါသေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ် သူကသူပဲကွ ဘာဆိုင်တုန်း။
အခု သားစိုးပြောတာ အမှန်ပဲ။ သာကူးတွေအခုခေတ်မှာများကများ။ ဝေးဝေး ပြေးမကြည့်နဲ့ ။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ပဲကြည့် ။ စည်းလုံးခြင်းအတွက်သီချင်းတပုဒ် ဆိုလိုဆို မဟာ ဘာညာနဲ့ နအဖ ကို ဖားပြီးနေလာတာ။ အခု ဒေါ်စုလဲ ok ရော ပြေးကပ်တော့တာပဲ။ ဒါတွေကိုသားစိုးကပြောနေတာ။ ကိုလေးဖြူ - ဘယ်လောက်ပြည့်ဝ လိုက်သလဲ ။ နအဖ အတွက် ဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဘူး။ ဒေါ်စုအတွက် သူရဲကောင်းစံအိမ်၅၄ ဆိုပြီး အခွေထွက်တယ် ဆင်ဆာညှိတော့ Power၅၄ ဆိုပြီးပြောင်းပြီးထွက်တယ် ဒါလည်း ဆင်ဆာထပ်ညှိတယ် ဒါနဲ့နောက်ဆုံး Power ဆိုပြီးထွက်ရတယ်။ အခုဒေါ်စုလွတ်တော့ အားလုံးသွားဆိုပြီးသူမဆိုတော့ ဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ကျတာ။
အရင်ကသူလိုချင်တာမရတော့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတန်းဘာညာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသူကိုယ်တိုင်ပဲသပိတ်မောက်ခဲ့တယ်။ အခုညှိလို့ရတော့ သူကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဖြစ်ရော။ သူမပါပဲနဲ့လည်း အနှစ် ၂၀ ဒီအတိုင်းနေလာခဲ့တာပါပဲကွာ။ ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ဘေးကနေထိုင်ပြီးလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးနေတာတွေတော့ အံ့သြမိတယ်။ သေသေချာချာစဉ်းစားကျ။ မင်းတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံ ဒုက္ခရောက်ပြီးပြီ။ ငါတို့ကတော့စောင့်ကြည့်မှာပဲ ။ တိုင်းပြည်ကိုတကယ်အကျိုးပြုမပြုဆိုတဲ့ ချိန်ခွင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ပဲလက်ခံနိုင်မယ်။
Khway ma thar.
Sout shat ma shi
Sout thone ma kya
Sout out tan sar mae
Sout tan ma win tae music nae musician so pashat ma shi koe bar ko khaw p thu myar ko way phan chin thay dal.
Sout khwat ko ka
nat ma kyite
lu ma kyite
Khway kite thay mae A LOE
Yoon pho kaung tal
Sout sint ma shi
Sout out tan sar
Sout tan ma win tae music nae koe bar ko
Sout shat ma shi musician khaw nay p
Way phan chin thay dal
Khway tha daung sar
Khway thar nan mal kyee chin loe shout pyaw nay dal.
Nan mal taw ma kyee bu Nan mal pal pyat mal nwar
Chee brain kaung
"(ဒီမိုကရေစီ နိင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို လွတ်လပ်စွာတွေးခွင့် ယူဆခွင့် ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်
ကိုယ်ဖာသာရွေးချယ်မူ ကကိုယ်အပေါ်မှာပဲ သက်ရောက်မူရှိမှာပါ)"
သိပ်မှန်ကန်တဲ့စကားပါ ဒီ Post ကိုတင်သွားတဲ့ လူကြီးမင်းကိုလည်း အကြံတစ်ခုလောက်ပေးပါရစေ လူကြီးမင်းက သူများအမှားသာမြင်ပြီး ကိုယ့်အမှားကိုယ် ဖုံးကွယ်နေသလိုပဲ ဒီ Post ရဲ့ အဓိက အနှစ်သာရက ဘာလဲ လူတစ်ယောက်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့တိုက်ခိုက်ထားတာပဲ ဆိုတာ အသိသာကြီးပါ အမေစုကို လူတိုင်းချစ်မှန်းသိလို့ အမေစုကို ချစ်သလိုနဲ့ မဏ္ဍိုင်ထားပြီး ခင်ဗျားရေးချင်တာကို ချပြသွားတာပဲ ရှိတယ် လူကြီးမင်းကရော အမေစုကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်လဲ အမေစုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက်ထိ သိထားလဲဆိုတာ ကျွန်တော်က ပြန်မေးချင်ပါရဲ့ လူကြီးမင်းက အမှန်တကယ် သိနားလည်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်စာကျမ်းကိုမှ မကူးချပဲ ကိုယ်ပိုင် ကောက်နှုတ်ချက်လေးနဲ့ Post တစ်ခုလောက်ထပ်တင်ပေးပါ ဒါဆိုလက်ခံပေးလိုက်မယ် နောက်ပြီး သားစိုးပြောသွားတဲ့အထဲမှာ မှန်တာမပါပေမဲ့ မမှားဘူးလေ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် သူပြောတာတွေက မမှားဘူးလေ တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူကို သူထောက်ခံမယ်ပြောတာ အမေစုကို မထောက်ခံဘူးလည်းမပြောပါဘူး သေချာပြန်သုံးသပ်ပါဦးဗျာ သူများမျက်ချေးကို ကြည့်နေတာနဲ့ ကိုယ့်မျက်ချေးကြောင့် စုံတော့မကွယ်နေစေနဲ့ပေါ့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲ ရိုင်းတာမှားတာရှိရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ကြိုက်သလိုပြန်တုန့်ပြန်နိုင်ပါတယ်
ဒီ Post အောက်မှာ Comment ပေးကြတဲ့အကိုတွေကိုလည်း စေတနာနဲ့ သတိပေးချင်တယ် Post ပိုင်ရှင်က သူ့ရဲ့Personal တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ဧည့်ထောက်မခံမိကြပါစေနဲ့ သားစိုးပြောတာ မှားတာတွေလည်းရှိပါတယ် မမှန်ပေမဲ့ မမှားတာတွေလည်းရှိတယ် သူ့ရဲ့ အမြင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျွန်တော်တို့မှာ ပိတ်ပင်ခွင့်မရှိဘူးလေ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
တစ်ခုပဲ အကိုတို့ သားစိုးကို မကျေနပ်ရင်တောင် ဒီ Post အောက်မှာတော့ $ ဖောင်းမထုမိကြပါစေနဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပို့စ်က Personal တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာ အသိသာကြီးလေ အမေစုကို ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ် အမေစုကိုထိတော့ကျွန်တော်တို့မခံဘူး အဲ့အတွက် သူလည်း မခံဘူးဆိုတာ ပြသလိုလိုနဲ့ သူမုန်းတဲ့ သူကို ဖဲ့သွားတာက ပိုသိသာနေတယ် အကိုတို့က အပေါ်ယံလေးပဲ ဖတ်မိမှာစိုးလို့သတိပေးနေတာပါ သူ့ရဲ့ အနှစ်သာရက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းပါပဲ.....
ညီအကိုတို့ကို မမှားစေချင်ဘူး ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး အကြံပေးခြင်းသက်သက်ပါပဲ ခံယူချက်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်....(ရဲနစ်)
MIN NARR LAL TWAR AUNG MIN PAN LOO PAY LIKE MAE THARR SOO ...BAL STATE HMAR NAY LAE PYAW...
January 19, 2012 at 2:38 AM
sorry guys, i don't know who the thar soe is. but he speak out the truth. asademocracy country anyone can speak frankly whatever they thought in their mind. u can't blame to anyone about that. even he can speak about it when every one supporting NLD. i'maNLD supporter. but i like what he said. no one know how much he is expecting about our country future. as for me, we got one point from him because he'll support anyone who can lift up our country. as we believe NLD CAN DO IT. that's mean he'll support DASSK one day. as our burmese, there are so many followers andafew leaders. if we can prove it he gonna be on our side.....
သူပြောတာမှန်နေတာပဲလေ... ဒေါ်စုက မြန်မာနိုင်ငြံ ကီးကောင်းစားအောင် ဘာတွေများလုပ်ပေးခဲ့ဘူးလဲ... လုပ်စားနိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်တော့ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်မှာပေါ့.. သားစိုး က သူ့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းပြောတာပဲ..ဒါကိုတော့ အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး...ဗိုလ်ချုပ်မျိုးဆက်တုန်းသွားအောင်လုပ်တဲ့သူကို အမေခေါ်နေတဲ့သူတွေ နဲနဲစဉ်းစားကြပါဦး
"ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ သည်းမခံမယ့် အထိခိုက် အပုတ်ခတ် မခံမယ့် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေ စာရင်းမှာ ထာဝရ ထိပ်ဆုံးမှာ ပါတဲ့ အမေစု ကိုစော်ကားလာရင် ကျွှန်တော် ဘယ်တော့မှ ဘာအကြောင်းပြချက် နဲ့ မှ သည်းခံ နားလည် ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်ပါတယ် ..." ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ မျိုးချစ်မြန်မာရေ။ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ
ထောက်ခံတဲ့လူတွေ အများစုကလဲ စေ..်တွေနဲ့ပဲတိုင်း
ဒီစောက်ရူးကောင်သားစိုး မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ (ဒီစောက်ကောင်ရဲ့ အမေအဖေတွေကိုကဒီလိုပဲနေမှာ) ကောင် ...နံမယ်ကြီးချင်လို့ စောက်ရူးထပြီး လျှောက်လုပ်လာတဲ့ စောက်ကောင် အခုလဲ မြန်မာမှန်ရင် အသိစိတ်ဓါတ် ရှိရင်တောင် အမေစုဟာ ဘယ်လိုကြီးမြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာလူတိုင်းရဲ့ အသွေးအသားထဲကနေ ကြက်သီးထလောက်အောင်သိတယ်..ဒီစောက်ကောင်က မသိဘူး..ဘယ်လို အသိညဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန် နဲ့ အလေနတော လူစပ်ပေါက်ထားတဲ့ ကောင်လဲ မသိဘူး...အရင်တုံးက ကမ္ဘာမှာတတိယအယုတ်မာဆုံး အစိုးရ အုပ်ချုပ်လို့အမေစု ကို ဘယ်သူမှတွေ့ ခွင့်မရဘူး..ဒါပေမဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိုယ်စီရှိကြတယ်..အခုတွေ့ ရတော့ အားလုံးဝမ်းသာအားရ တွေ့ ကြတာကို ဒီစောက်ရူးကောင်က နားမလည်ဘူး...နံမယ်ကြီးချင်တာပဲရှိတယ်...အရင်အစိုးရအုပ်ချုပ် လို့ ငါတို့ တိုင်းပြည် အခွန်ပဲကျန်တယ်..ရွံပြီး.ကြောက်လို့ အဘခေါ်တာ ဒီကောင်နားမလည်ဘူး...ခုအကောင်းဘက်ဦးတည်နေတာကို ဒီလူ.တိရစ္ဆာန် က .....ရင်လေးတယ် လူ့ တိရစ္ဆာန်နဲ့အူကြောင်ကြောင် မနဲ့ရတဲ့ စောက်ကလေးတွေ အစားရင်လေးတယ်....
ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလည်း နိုင်ငံရေးဆိုတာကကော၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူများအော်လိုက်အော် လုပ်နေသူတွေထက်စာရင် ဘက်မလိုက်ဘဲစောင့်ကြည့်နေရမှာပဲပေါ့။ သေချာတဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်မှာပဲပေါ့။ ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ် ပြောရမဲ့အချိန်က စောလွန်းပါသေးတယ်။ ဘယ်သူဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းအောင်ကြိုးစားပန်းစား တည်ထောင် သူကိုယ်တော့ထောက်ခံပေးရမှာပေါ့။ နိုင်ငံသားထဲက နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်လို့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ကို ခံစားကြရမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမထောက်ခံလို့ အစိုးရကိုမထောက်ခံလို့ မှားတယ်မှန်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ မတောက်တခေါက်သိတာလေးနဲ့ ဟိုလူ့ပုတ်ခတ် ဒီလူ့ပုတ်ခတ် ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရတာလည်း။ အကောင်းမြင်ပေးကြည့်ကြပါ။ ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ် မပူလောင်ဘူးပေါ့။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွန်းအားတွေက အောင်မြင်မှူအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမုန်းတွေတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
နိင်ငံရေး နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောနေကြတဲ့သူတွေ ..တကယ်နားလည်ိတဲ့သူရှိသလို နားမလည်တဲ့သူတွေကပိုများပါတယ် တခုရှိတာက မြန်မာတွေတော်တော်များများက ထစ်ကနဲရှိ သူများကပေားလားဝါးလားလုပ်ရင်လိုက်လုပ်မယ် ဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး..ကျွန်တော်လဲမြန်မာတယောက်ပါပဲ လူတိုင်းမှာလွပ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်လဲရှိပါတယ် ..သားစိုးရဲ့ အနုပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လဲသဘောမကျပါဘူး ဒါပေမယ့်ကိုမျိုးချစ်က ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေသလားလို့ ..နောက်တခုကဘယ်သူတွေပဲဦးဆောင်ဆောင် နိုင်ငံအတွက်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုပဲ ရွေးချယ်ကျပါလို့ personal အစွဲအလမ်းတွေမထားကြပါနဲ့...
သားစိုးပြောတာမှန်တယ်လဲ မပာုတ်သလို။ မှားတယ်လဲ မပာုတ်ပါဘူး။ သူ့ အမြင်ကို ပြောတာပါ။ စော်ကားတာ မပါပါဘူး။ အံတီ အခုဘာလုပ်ပေးနိုင်ပြီလဲ လို့ သူ မေးတာပါ။ သူ မေးတာ ရှင်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကိုတော့ ကိုမျိုးချစ် Website မှာ လူသိရှင်ကြား အဲလို ပြောရလောက်အောင် သူ ယူဆထင်မြင်တာ မကြီးကျယ်ပါ။ Pls Be Educated.
ွှThe Fuckman said...
Hey , Thar Soe min bar thar min 37 min nat akyaung pel pyaw par min nar ma lal telt case ko win ma par nelt.
နိုင်ငံေ၇းကိုတော့သေသေချာချာနားမလည်ပေမယ့် သားစိုးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ယှဉ်ကြည့်စ၇ာတောင်မလိုပါဘူး ဘယ်သူက သာတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်
Hka Lai said...
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် လူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ ဒီမိုကရေစိ
Let me share something you guys bout Burmese people.
As you guys know, Burma has been ruled by brutal military junta and isolated for so many decades. They have been systematically destroyed the people in so many ways either physically or mentally. We must have to be broad-minded people. Manage our angry because we cannot be able to find the right understanding or solution. Determination isatrait people admire. Thank you. Best wishes friend.
botataung thar said...
အမေစုဆိုတာငါတို့နိူင်ငံကောင်းစားဖို့ယောက်ျားနဲ့သားသမီးတွေစွန့်လွှတ်ပြီးပေးဆပ်နေတာတောင်မသိဖူးလား။မင်းသာAmerican Citizen ဖြစ်ဖို့တရုတ်မယူပြီး၊နိူင်ငံမှာငကြောင်နတ်ကတော်သီချင်းတွေဆိုနေတဲ့ကောင်။
ကိုသားစိုးလုပ်တဲ့အနုပညာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ... သူပြောတာကသူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူလေဘာမှာမဆိုင်ပါဘူး ၀ါလုံးရှည်နဲ့တော့ပတ်မရမ်းသင့်ပါဘူး....ဒီမိုကရေစီ
အမေစု ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အားကစား ခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသားတွေသိနေတာပဲ...။ အများကောင်းကျိုးသယ်ပိုးသူအတွက် အများကထောက်ခံအားပေးနေမှာပဲဗျာ။ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ်မသွားပါဘူး။
အမေစုက အရည်အချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာအတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်နေမှာလဲဗျာ။ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပဲ။
Tharr soo, you r stupid ,no standard .if u don't know don't talk ok .stupid guy
သူပြောတဲ့ အဓိပယ်ကိုနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူသုံးသွားတဲ့ စကားလုံးတွေက မှားရွင်းနေပါတယ် တကယ် သူက ဟိုကူးဒီကူးတဲ့ သူ့ တွေကို မုန်းတီးတဲ့ စိတ်ကနေ
အမေစုဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ဘူး ဆိုရင်တောင် နိုင်ငံသူရဲကောင်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ မျိုးဆက်တယောက်ကို သူဒီလိုမပြောသင့်ပါဘူး...အမေစုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ ဆိုတာတော့ သူမှမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်သူမှ မပြောနီုင်ပါဘူး...အမေစုပြောတဲ့အထဲမှာ ဘာလုပ်ပေးမယ်
ညာလုပ်ပေးမယ် တခွန်းမှ မပြောခဲ့ပါဘူး..အတူတူလက်တွဲပြီး နိုင်ငံအမှားတွှေ ပြင် အမှန်တွေလုပ်ဆောင်ကြဖို့ ပဲပါပါတယ်...သူအမြင်ကတော့တခြားလူတွေကိုမုန်းတီးတာပါ...သူမပါပါရင် မပါနဲ့ လေ ပုပ်ခတ်စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်
အားလုံးစောက်ရုးတွေ ဆရာကြီးတွေကျနေတာပဲ ဘာမှလဲနားလည် လုပ်ပေးနိုင်တာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပွားနေကြတာ
THARR SOO PYAW TAR HOTE TAL SO TAE KG KA A MYOO TWAY PHIT YA MAE..NGA LOO MA TARR TWAY.. MIN TOE NARR LAL AUNG PAN NAE LOO LOZ MA YA BU KWA..NARR NAE LOO PAY YA MA LARR???DOG KG TWAY
ဟုတ်ကဲ့ပါ..အခု ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဆီကို ချီတက်နေကြပါပြီ..မြန်မာပြည်သူ/သားတိုင်း အခုထက်ပိုပြီး အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ ပိုတိုးအောင်ကြိုးစားသင့်ပါပြီ..သားစိုးပြောတဲ့စကားနဲ့
ဖြူဖြူကျော်သိန်းပြောတဲ့စကား..ဘယ်သူ့စကားက ပြည်သူတွေကို ပိုစော်ကားသလဲ..မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တက်ကြပါ..
ထစ်ကနဲဆို ဆဲတာဟာ ငါတို့အားလုံး လိုချင်နေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြီးလား...
Agree and thumbs up.
Bump & Rate +
daw aung san suu kyi isagreat leader at this time.Nobody is perfect.Let me tell you example in 1990 election, I am sure all of Burmese know that NLD won election at that time.What Happened ? Daw Auns san suu kyi refused to declare asaprime minister by saying ... Burma Military was founded by My father and i had faith , they will hand over power soon and give them sometime. Thats true.My point is no one is perfect even our leader Daw aung San Suu Kyi.If u ever haveachance to meet her please feel free to ask her .. i am sure she will admit.
Oliver Jo Jo said...
Everybody knows who is Aung San Suu Kyi and I don't know who is Thar Soe. And I don't need to know who he is. Just wasting my time. I really appreciated and love Aunty Suu. That's all I want to say!
Ko Thia said...
Emm from the evedence of the the past
practise of political fields in every country, those who r elite usually go one side to another . It is ment that changing political situration. pl find out more and see back on others.
Set Htun said...
Appreciate on Thar soe's bold openness and he is better than following directors Zagana & et. al.
”ဦးခင်ညွန့် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်က အစ်မတို့ လူငယ်တွေ အတွက် နေရာ အများကြီးပေးခဲ့ပါ တယ်။ အစ်မတို့ ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူအများကြီးလုပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ပြောရရင် ဦးခင်ညွန့်နဲ့က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် တုန်းကလည်း အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ နောက် ဦးခင်ညွန့်က အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ် သက်ပြီးလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီဟာတွေက အစ်မရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကျေးဇူးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ မြင်တယ်။ သူ လွတ်မြောက် လာတော့ အရမ်းဝမ်း သာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွားတွေ့တာပါ” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
Very sorry Kyi Phyu Shin for your narrow angle, How's your blood descendent from Bo Zay Ya (30 Comrades).
ဦးဇင် ဝိုင်းကလည်း ”ဦးခင်ညွန့်က ရုပ်ရှင် လောကမှာ ကောင်းကျိုးတွေ ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီး တွေ့ချင်တယ်။ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး ကလည်း ဦးခင်ညွန့်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မမြင်ဖူးလို့ မြင်ဖူးချင်တဲ့ အတွက် ဦးသူရတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့တာပါ။(ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်)
Good EQ and Very Bad IQ those directors of Bogyoke movie.
no...........thar soe is right
Daw Su ka br lote pay khae lo. lae.........NLD so tr lae against Party pae
Than Soe said bold openness honestly, Pleas see some said :
Amazing and sorry K P Shin for your narrow angle, How's your blood descendent from Bo Zay Ya (30 Comrades).
ပြောရမှာလည်း အခက်သား ။မှန်လွန်းတော့ ခါးကြပေလိမ့်မယ်။
ဆတ်ဆတ်ထိ မခံတဲ့လူဆိုတာ ပိတ်ထားတဲ့ လူပါ။open minded တဲ့ ကြားဖူးကြရဲ့လား မသိဘူး။
သူများတွေပြောတာကို မစဉ်းစား မဆင်ခြင် ပဲကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာလေး
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် နှစ် ၂၀ ကျော် ပေးဆပ်ခဲ့တာအမှန်ပဲ။
စွန့်လွှတ်ခဲ့တာတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် ဆိုပြီး ထောင်ကျ/ အကျဉ်းကျ ခံနေရုံ
နဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ် ယောက်လို့ အကြွင်းမဲ့ သတ်မှတ်ထားကြမှာလား။
Politics မှာ Leader ဆိုတာ Decision Maker ပဲ ။
လူ ထုကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူဆိုတာ လူထု နှစ် ၂၀လောက် နွံနစ်မဲ့ Decision
ထားတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကဟာကို။
အဲ့ နှစ်၂၀ ထဲမှာရော တစ်ကယ်အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေတွေ မှာ ဘယ်လို Decision
သိကြရဲ့ လား။ လေ့လာ ခဲ့ဘူးကြရဲ့ လား။
လောလောလတ်လတ် ၂၀၀၈ နဲ့၂၀၁၀ ကိုသူဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့လဲ။
မောင်ရင်တို့ ploitical side ကနေသုံးသပ်ဘူးကြလား။ သုံးသပ်တတ်ကြရဲ့လား။
Democracy and politics mean not only Daw Aung San Su Kyi,besides you
all have to know other situational problems. ! You all have to
consider what the meaning of Leadership is.
I will not reply just for any childish !
မျိုးချစ်မြန်မာအနေနဲ့ မြန်မာစကား ကိုကောင်းကောင်းလေ့လာဖို့လိုသေးတယ်ထင်တယ်။ သားစိုးဆိုတဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကောင်ရဲ့ပရိတ်သတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ခွေအလကားလာပေးလည်းနားမထောင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီး လျှောက်ပြောတာတော့မကောင်းပါဘူး။ သူပြောတဲ့ အထဲမှာ ဘာမှမှားတာမပါပါဘူး။ မြန်မာစကားကိုသေချာနားလည်ရင် သူမမှားဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်မှာပါ။ နောက်ပြီး အပေါ်က horizon ဆိုတဲ့ကောင်ရေးထားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောစရာရှိတယ်။ မင်းပြောသလို ဇော်ဝင်းထွဋ် နအဖကိုဖားတာ၊ ပြေးကပ်တာတွေကိုတော့ မင်းအမြင်နဲ့မင်း ငါဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စည်းလုံးခြင်းအတွက်သီချင်းတပုဒ် ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ပါ။ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုလားတဲ့ ကိစ္စပါ။ အဲဒီသီချင်းမှာ စစ်တပ်၊ တပ်မတော်ဆိုတာ ဘာမှမပါပါဘူး။ နောက်ပြီး မဟာ သီချင်း၊ မဟာဆိုတာ ပုဂံအကြောင်း၊ မြန်မာတွေရဲ့ဂုဏ်ယူစရာသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ မင်းညဏ်ရည်မမှီရင်လည်းမမှီသလိုနေပါ။ သူများကိုမစော်ကားပါနဲ့။ နအဖကိုမုန်းတိုင်း နအဖနဲ့ မဆိုင်တဲ့ရာကို အဆိုးမမြင်ပါနဲ့။ သူဖြူရင် ငါမည်းရမယ် ဆိုတဲ့မင်းစိတ်ဓါတ်နဲ့ သူများကိုလိုက်မပုတ်ခတ်ပါနဲ့။ ။
အော်...၇န်ဖြစ်နေကြတယ်...သားစိုးပြောတာ..လက်မခံနိုင်တာတော့ အားလုံးသိပြီးသား ဟုတ်...ဒီကောင် ဘယ်သူ့ ကို၇ည်၇ွယ်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာ. မသိကြလို့ လား...ထားပါ...မသိဘူးပဲ...အမေဆု ကေ၇ာကျွန်တော်ဒို့ ကိုဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုတာက တော့..၇ိုင်းတယ်အဲကောင်တော်တော် ၇ိုင်းတယ်..အခုလုပ်ပေးနေလို့ ဒီအဆင့်ထိေ၇ာက်လာတာ..ဒီကောင်ကိုနားလည်စေချင်တယ်...
အလကား သားစိုး၊သီချင်းတွေကလည်း ဘာမှန်းမသိ၊လူ ကလည်း ဘာမှန်းမသိ၊သူ့သီချင်းတွေကို သပိတ်မှောက်သင့်တယ်။တခွေ မှ လည်း မ၀ယ်ဘူးပါဘူး။
ဟုတ်တယ် ငါကတော့သားစိုးပြောတာကိုလက်ခံတယ် ။ အခုမှ NLD 0င်ရတာနဲ့ သွားတွေ့ရတာနဲ့ တခါတည်း ။ ဒေါ်စုကိုလေးစားပါတယ် ။ သူအနစ်နာခံရတာလည်း သိပါတယ် ။ ငါတို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့လည်း။ ဘာမှမသိရခဲ့ပါဘူး ။ မယုံရင် မင်း အောက်ခြေလူတန်းစားနဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေသွားမေးကြည့် ဘာထူးလာလဲလို့ ဘာမှမထူးဘူးလို့ဖြေတဲ့လူ ၁၀၀ မှာ ၉၀ မရှိရင်ငါ့ကိုလာသတ်လိုက် ။ မင်းတို့ ကဒေါ်စုတစ်ယောက်ပဲအမှန်လို့ထင်နေတာကိုးကွ ။ သူလည်း လူပဲမှန်ချင်မှန်မှားချင်မှားမှာပေါ့ ။
အိုဘားမားနဲ့ ဂျွန်မက်ကိန်း ဆိုရင် အိုဘားမားက Change ဆိုပြီး ဘာလုပ်ပေးမယ်၊ ညာလုပ်ပေးမယ် စသဖြင့် ပြောခဲ့တယ်။ ဒီလိုမျိုးပါပဲ။ အခု ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တော့မယ်။
ဒီအချိန်မှာ အန်တီစုကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တော့မယ်။ အန်တီစုကို ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးက ချစ်မြတ်နိုး ပြီးသားပါ။ သူက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူလုပ်နေတာတွေ ကလည်း အများကြီးပါ။ သူ အနစ်နာခံခဲ့ တာတွေ ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံး သိတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အန်တီစုရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို နားထောင်ဖူးတယ်။ အဲဒီတော့ အန်တီစုက ကျွန်တော် တို့ကို ဘာတွေ ဆက်လုပ်ပေးမှာ လဲဆိုတာ ကျွန်တော် သိချင်တာပါ၊၊ ဒါကိုတိုင်းသူပြည်သား တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျွန်တော် မေးခွင့် မရှိဘူးလား။ အန်တီစုဘာတွေ ဆက်လုပ်ပေးမှာလဲ၊၊ တခြား ပါတီတွေကကော ဘာတွေ လုပ်ပေးမှာလဲ။ (သားစိုး) http://popularmyanmar.com/mpaper/archives/35303
The author of above quote said about democracy in U.S. I totally disagreed with him.
In U.S, the people can question any public office representatives including the President of the United State to what their plans and how much they can do for people before we vote for them. So, Thar Soe's question about Daw Aung San Su Kyi is nothing wrong and not offense to DASSK. Also, for the record
Daw Aung Sun Su Kyi is not only person who sacrifice herself for democracy in Myanmar, but also there are thousands of people who sacrifice themselves and their family lifes for democracy. DASSK did not get chance to see her husband before he died, but both of her sons have good life in England. That is the fact nobody can denied. On the otherhand, most of the political presoners life and their families life are destroyed. What did DASSK do for them? What did she do for the people when she was freed from house arrest? Please,If you compare her with Kyaw Thu, you can see who did for the burmese people and who is talking and who is doing.We have enough speech, we need action.
ူLynn Zat ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးရေ ....အပြောကတော့ ရွှေမန်းပဲ၊ မင်းကပဲ အရာရာကို သိသလိုလိုနဲ့ .... အနှစ်(၂၀)နီးပါး မင်းအဖေတွေက သူ့ကို အကျယ်ချုပ်ချထားတာ သူဘာလုပ်ပေးလို့ ရမှာလဲ၊ ဘာ Decision လုပ်ပေးလို့ ရမှာလဲ၊ ချီးထုပ် ....
ကို S.T ရေခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်.ဗျာ.အနှစ်၂၀နီးပါးအကျယ်ချုပ်ထားတာပဲကိုမျိုးချစ်အနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အနုပညာလောကကိုစော်ကားလိုက်တဲ့သားစိုးဆိုတဲ့ စာတန်းကြီးကတော့ ပြင်းထန်လွန်းပါတယ်..သူလည်းအဲ့ဒီသဘောနဲ့ ပြောတာတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး ..လူတိုင်းဟာကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုးကိုတော့ ချစ်ကြမှာပါ နောက်တစ်ခုက ကိုမျိုးချစ်ပဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ချင်လို့ ဒီပိုစ့်ကိုတင်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတိုက်ခိုက်ချင်တာဆိုရင်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိတာပဲ နောက်ပြီးဒီအောက်မှာကွန်မန့်တွေလာရေးပြီဆိုကတည်းကအမိမြန်မာပြည်ကအကိုတွေအမတွေ နိုင်ငံခြားကအကိုတွေအမတွေရှိနေမယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့သိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ နောက်ပြီးအဲ့ဒီအကိုတွေအမတွေကလည်းခေတ်ပညာတတ်တွေနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ထားကြမယ့်သူတွေဘယ်သူက ဘာဆိုတာကိုသိထားပြီးသားသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်အင်တာနက်မှာခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဝေဖန်ရေးဆွေးနွေးရေးဂီတဆိုလည်းဂီတအလျှောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပြီ ဆိုမှတော့တော်ရုံတန်ရုံသူတွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသူမျိုးတွေရှေ့မှာကိုမျိုးချစ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။
သားစိုးပြောတာက တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ လူဘယ်သူကိုမဆို
လို့ ပြောတာထင်တယ်။သားစို၇ဲ့ Idea ကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် စကားလုံးမေ၇ွှးတတ်တော့ 
ထင်မြင်ပိုင်ခွှင့် ၇ှိပါတယ်'right to speak" ဒါပေမယ့် ပါးနပ်ဖို့ တော့ လိုမယ်ထင်တယ်
တော်ရုံတန်ရုံ လူတွေမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကိုမျိုးချစ်မြန်မာ သိမှာပါ ….
အခု အချိန်မှာ ဒေါ်စု လုပ်နေတာတွေကို ကိုယ်ပိုင်အမြင် နဲ့ ပြောပြကြည့်ချင်ပါတယ် ….
မြန်မာပြည်အနှံ လျှောက်သွားပြီး မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းတွေ လုပ်နေပါတယ် ….
မျက်စိထဲမှာ မြင်တာတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သူတစ်ယောက်ပဲ
အလုပ်လုပ်နေသလိုလိုပဲ …. အားလုံးအမြင်မှာလည်း ဒီလိုဖြစ်အောင် သူလုပ်နေတာ ….
တကယ်တော့ အရောင်းထိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုကို ပရိုမိုးရှင်း လုပ်သလိုပါပဲဗျာ ….
အဲ့လိုလုပ်နေတော့ ကြာလာတော့ လူပေါကြီးတစ်ယောက်လိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား ….
တကယ်လို့ ဒေါ်စု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် အဲ့လို လမ်းပေါ်ကို ထွက်စရာ
မလိုပါဘူးဗျာ …. ထိုင်နေရုံပါပဲ …. ဒေါ်စု ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ် ..
ဒေါ်စု ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလည်း ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မှာလည်း ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော
တစ်ခုက မေးသင့်တယ် တစ်ခုကတော့ မမေးသင့်ဘူးပေါ့ဗျာ …. ဒေါ်စု ကို ထောက်ခံတဲ့
လူတွေဘက်ကကြည့်ရင်ပြောတာပါ …. တကယ်ရော ဒေါ်စု ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ….
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ အကျဉ်းကျခံခဲ့တာလား ….
သူဖိအားတွေ ပေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာခဲ့တာလား ….
မယုံရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ …. နအဖ ဆိုတဲ့ အစိုးရက သူတို့စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို
သူတို့ လုပ်တာဗျ …. ဒေါ်စု တစ်ယောက် ဖိအားပေးတာလောက်ကို မပြောနဲ့
အမေရိကန်က ဖိအားပေးတာတောင် သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့သေးတာပဲ ….
ဒေါ်စု လောက်က တော့ သူတို့က သနားတယ်ပေ့ါဗျာ…. ကြည့်ပါလား …
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်လွပ်ခါနီး ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ အကျယ်ချုပ်ကို
ထပ်ပြီးတိုးလိုက်တာလေ ….. အခု ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတာက
အချိန်တန်လို့ရောက်လာတာဗျ …. အခု ဦးသိန်းစိန် ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလည်း …. မေးကြည့်ရင်
အရာထင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေ ပြစရာအများကြီးပဲ … ဒေါ်စု ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလည်း ….
ပြစရာကတော့ … နေရာတိုင်းကို လျှောက်သွား လက်ကလေးပြနှုတ်ဆက်
မိုက်ကရိုဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်နေသလိုပဲ …. သူလာလို့တဲ့ နေပူမရှောင်
မိုးရွာမရှောင် သွားကြည့်ကြတဲ့လူတွေက ဒေါ်စု ကို အားပေး နေတယ်များထင်နေလား ….
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီးဆိုပြီး သွားကြည့်တာဗျ …. လူတွေ လေးစားတာ ဒေါ်စုလား ….
ဗိုလ်ချုပ်လား …. ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ …. အဖေ့အရိပ်ကိုခို နာမည်ကို
ပြည်သူသိအောင်လုပ်တာပါ …. အဲ့ဒါ အခုလောလောဆယ် ဒေါ်စု လုပ်နေတာ ….
ထားပါတော့ ဒေါ်စု က ကောင်းတယ်ပဲ …. ဒေါ်စု ကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်
လုပ်ခိုင်းလိုက်ရင်ရော ….. ဒေါ်စု ကတော့ ပြည်သူတွေအပေါ်ကောင်းပါတယ် ….
သူရဲ့ အောက်က သူ့အဖွဲ့စည်းတွေကရော ဒေါ်စုကောင်းသလိုကောင်းနိုင်ပါ့မလား
ကိုမျိုးချစ်မြန်မာ … မထူးပါဘူးဗျာ အရင်အစိုးရထက်တောင် ပိုဆိုးဦးမယ် ….
အရင်အစိုးရကမှ ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက် ပြည်သူတွေဆီက အခွန်ကောက်
လမ်းတံတားတွေ ဆောက်ပေး ခဲ့သေးတယ် … ကိုမျိုးချစ်မြန်မာရေ ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေဆိုရင်ရော … ကျုပ်တော့မထင်ဘူးဗျာ ….
အရင်အစိုးရကို အကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် …
အခု မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ရ အခြေအနေမဲ့တွေ အများကြီးပဲ ဒေါ်စု ဘာလုပ်ပေးနိုင်လည်း …
ပညာ မတတ်တဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအတွက် ဒေါ်စု ဘာလုပ်ပေးနိုင်လည်း ….
မြင့်တက်နေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအတွက် ဒေါ်စု ဘာလုပ်ပေးနိုင်လည်း ….
အခု သူလုပ်နေတာကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ပရိုမိုးရှင်း လုပ်နေတာပဲ …
ရောင်းမထွက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရောင်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့
သားစိုး ရယ် မင်း စာများများဖက်စမ်းပါ...
thetzaw myint said...
အော် လိုက်တော့ သာစိုးရေ
ရိုးရာ အနုပညာကို ဖျက်ဆီးတဲ့ နင့်အတွက်
ငါတို့လို အားပေးသူတွေအတွက်တော့ ဝမ်းနည်းပါတယ်
''မိုက်လိုက်တဲ့ သားရယ် ကို့အမေရဲ့မေတ္တာ ကိုမှနားမလည်''
အမေစု က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဖိုးကမွေးခဲ့ တဲ့ အမေ ဆိုတာကို နားလည် သင့်တာ ပေါ့ ။